Amiin Arts oo Sawirkii ugu saamaynta Badnaa ka sameeyay Berbera (Daawo) | Kalshaale
Mar 13, 2018 - 15 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Farshaxanka Soomaaliyeed ee Amiin Caamir oo inta badan ka Faalooda Arimaha Soomaaliya ayaa Sawir Gacmeed Wuxuu ku sameeyay Heshiiskii Dekedda Berbera, kaasi oo dhexmaray Shirkad Imaaraadka laga leeyahay, Itoobiya iyo Somaliland.
Waa sawir xaqiiqada jirta taabanaya.
Aamiin arts,caadi maaha.
Emaaraatku waxay noqondoonaan mushkilad wayn oo ka daran tii Ethopiya ay ku haysay Somalida.
Wxaan isleehay,waar dadkii Somaliyeed ee Ethopiya oo waxba haynin u kala dhuumanjiray,ee kolba mid loo yeedhayay,sidee bay Emaaraatku ka yeelidoonaan?
Kuwii aan aqaanay oo lacag yaacasa arkay,sideebay noqondoonaan?
Arimaha noocan ah dad midaysan ayaa ka bixikara,laakiin dad lacag raadis ah waala tukaamaysan.
Bal u fiirsada waxa ay Idoor ku faraxsanyihiin.
Ethopiya iyo iyagu waxay isdheeryihiin,11.
Ehtopiya waxay helaysaa.19,Somaliland oo ah mulkiilihiina 30.Faraqa u dhexeeyaa ninkaa cidlada iska jooga iyo kii dhulka lahaa,%11.
Si kastaba ha ahaatee Emaaraatku ma noqondoonaan qaar sidaa lagaga gayoodo.
Muuse oyaaye sowka ethiooia lanaugaya maha mirqaanka badan dhibkaas ayuu leeyahy gah gah gah gah
Sawirkaan mecno weyn ayaa kujiro
Itoobiya iyo somalidu halnaas ayey wada nuugayaan emaraadku 3 naaa ayuu nuugayaan kkkkkkkkkkk afrikaanku marwalbo waa bahdilan yahay
Halkii farxiyo ka dhihi jirtay (BAADI IRMAAN
Reer pudland warku meydin dhacay bd world laguma Arki karo bosaaso heshiikii hore filinkiisa eeyaa cunay
GO.AANKII UGU FIICNAA AYUU BARLAMAANKU SOO SAARAY
Madaxweyne farmaajo ha qaato amarka barlamaanka
Nin dhulkiisa kula shirkoobey AXMAARO wuxuu la midyahey nin Xaaskiisa kula shirkoobey rag kale.
Sidaad wada ogtahiinba lama diidana in shirkado horumarin ku sameeyaan dhulka soomaaliya sid dekadaha, airport, jidadka, biyaha, Beeraha, etc.
Waxa la diidanyahey waxaa waaye inaad dhulkaada kula shirkowdo cadowgaada adigoo leh wuxuu iga difaacahayaa dadkii dhulka kula lahaa (somali)
-Hadey Somaliland u muuqatey iney Itoobiya ka difaacdo somalikale been ayaad u sheegten naftiina.
waqtigii Roman empire qabsatey Middle East ayaa Yemen waxey u tagtay Persian empire (Iran) ayadoo weydiisatey iney ka difaacdo Romanka ku soo duuley Asia,
Persian kama waalin ee waxey dhahdey markaad qof ama dal ka difaaceyso cadowkale waa inaad ka midnoqoto milkiilaha dhulkaas ama badeecadaas (waa inaad heysato sharci wax ku lahaasha)
Yemen arintii waa ku adkaatey maxaa yeelay waxey ogaadeen in Roman yahiin dad ka soo duuley qaarad kale oo aan aqoon dhaqanka iyo cimilada Asia, laakiin Persian empire (Iran) waa dad degan ama daris dhow kula ah oo aan meel u socon hadaad ku sooryeyso dhulkaada iyo hantidaada sideed barito uga kicinkartaa markuu laabto cadowga kore.
Hadda shirkadda carabta waa shirkad ganacsi oo barito qasaarikarto, ku xiran isbedelka Dubai, ka yimid qaarad kale,
Laakiin AXMAARKII deriskaada ahaa, ee bad la’aantu heysey, 100 million ahaa, ee horey u heystey maanto aan is xoreynkarin, kula shirkow dhulkaadii waxa sababey soo uun maahan naga ilaali SOMALIA.
Adeer dalkan dowlad federal la dhaho oo iyana inshaa alaah aan ka gudbi doono, nimankan SNM awelba waxay ka faaiidaysan jireen burburka iyo dhibaatada Soomaalida kale carabtu waxay ku maah maahdaa ((خسار قوم عندالاخر فرفاءدهم)).
Markaasay ismoodeen in ay dowlad yihiin.
Waxaaba hadda uga daray nin la dhaho Mustafe Martin oo dhisay dowlad la dhaho (United S/land forum). Oo dibada laga dhisay diyaarna u ah in uu Somali la midoobo.
Ilaahay baan idinku dhaarshee umadda kii ay doorteen sidii la ogaa u hadlayey miyaa dal lagu halayn karaa waa maya habdhaqanka madaxweyne ama dublamaasiyadeed waa ka madhan yahay kulahaa ((Dameer ciyey, kaskaa baad hadashay, waad nalayseen, xabaalaad noo samayseen))!!!
Hayaan inta muuse biixi sheegay waa runtiis
Shacabka gobolada Waqooyi waxaysan ogeyn iney u rahamanyihiin dawladda Ethiopia , kadib markii lagasoo amaahday 100.000 YAHADHIG JACKET ah iyo qalab Kale oo tiro badan lkn tayo yar. YAHADHIG JACKET waa jaakadda u eg XAFAAYADDA ee kaakiga ah ee ay xiranyihiin marya-aloolka Fallaagada-waqooyi . Koontooyinka xaalufinta ee laga furtay Ethiopian Commercial Bank.
” Ku difaac qabiil ”
Waxaa idanku soo maqan Sheeko la yiraahda HOO WALAALOOW.
Nin ka xamaalanjiray dekadda Xamar ayaa AXADDII uu Siyaad Barre ka baxay Xamar waxuu wax ka dejinayey markab siday BUR / DAQIIQ . Ninkii waxuu arkay dadkii oo ku soo yaacayo dekadda. Waxaana Loo sheegay iney dadkasi yihiin walaalihii USC. Dalkiina ay qabsatay USC. Ninkii wuu farxay. Jawaankii uu soo qaadaba waxuu siiyaa mid ka mid ah WALAALIHII USC . Burkii la dhameysay isaguna waxba lama harin. Waayo waxuu sugayaa iney WALAALIHII USC siin doonaan MUSHAAR . Isagoo ku hayo aawayo WALAALAHEY ayaa laga kala yaacay. Hadda waa ninkii maantoodhan ku heesaayey HOO WALAALOOW.
Hedda kuwa ka midka ah shacabka gobolada Waqooyi ee taageerayo Fallaagada waxaa u dambeyndoonto =
WALAAHAY WUU ASIIBAY.
THANK YOU AMIN ARTS.
NO MORE ETHIOPIA & DP WOLRD.
CAYRINTII DP WOLRD WAXAY AHAYD GUUL
Eygaan Amin Caamir!
Waa mooryaan, waxa Somali isku haysato kuwo Hawiye ah ku shaqaystan usoo dhiga si loogu qoslo! Mooryaankaan waa ragga loo narecay Somalia.
Waa ey ey dhalay!.
Somaliland waa sac DP nuugayso??
Hooyadaa siilka ka was Amin Camiru
Hadaa ma Amin Caamir
Somali heshiin mayso ilaa Xamar ogolaato! Waa simanahay. Doofaarkaan oo kale waxaan ku hadlayo.
Yaa cawaan wax ku darsan kara😎